Dadweynaha gobolka Cayn oo ku kala aragti duwan wada hadal nabadeed oo laga galo dagaalkii Kalshaale. – Radio Daljir
Buuhoodle, May 28 – Dadweynaha gobolka Cayn ayaa isku-maandhaafsan in wada hadal nabadeed lala galo beesha bariga gobolka Togdheer ee dagaalkii dabada dheeraaday ee ilaa sanadkii hore dabayaaaqadiisii ka dhacayey deegaanadda Kalshaale, Hagoogane iyo Maygaagle.
Is-maandhaafka ayaa yimid kadib markii dhawaan ay odayaasha iyo waxgaradka gobolka Cayn ay xidhiidh lasoo sameeyeen qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha bariga Burco, gaar ahaana kuwa deegaanka Qorilugud, kuwaas oo codsaday wada hadal nabadeed oo dhex mara labadda dhinac ee markii hore fidnadu ka bilaabatay.
Waxgaradka gobolka Cayn ee xidhiidhka lala soo sameeyey ayaa dadweynaha gobolka Cayn u qabtay shir ay kagala tashanayaan waxa laga yeelayo baaqa kasoo baxay beesha bariga Burco; dadweynihii loo bandhigau fikirkaasi ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arintaasi.
Qaar kamid ah dadweynaha ayaa arintaasi soo dhoweeyey, islamrkaana sheegay in xiligan loo baahan yahay nabad ka dhex dhalata labada dhinac, halka inta badan bulshada gobolku ay si weyn uga soo horjeesteen iyagoo markaasi ku sababeeyey in dagaalka aysan ku jirin oo keliya beesha bariga Burco, balse ay tilmaameen in ay ku jireen dhamaanba beelaha Waqooyi Galbeed ee Somaliya ‘Somaliland’, hadiiba wada hadal la gelayana ay haboon tahay in lala galo cidii wax dhexmareen.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Cayn Maxamuud Sh. Cumar oo maanta (Sabti) nagu soo booqday xarunta idaacada Daljir ee magaalada Buuhoodle ayaa sheegay in xiligan aysan munaasib ahayn in wada hadal lala galo hal garab oo ka mid ah dadkii dagaalka lala galay.
Maxamuud Sh. Cumar ayaa tilmaamay in hadii wada hadal iyo nabad la rabo marka hore loo baahan yahay in la joojiyo waxyaabihii la isku diley, kuwaasi oo ay ka mid yihiin faragelinta maamulka Somaliland ee deegaanadaani iyo sheegashadda Somaliland ee ku wajahan gobolka Cayn.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa ku celceliyey in maamulka Somaliland uu wado khiyaano la xidhiidha furfurista dadka deegaanka ee u midaysan difaaciisa, sida uu hadalka u dhigay; waxaana uu cod dheer ku yiri “waxaan u arkaa wada hadaladaasi la sheegayo in ay yihiin wax daba marin iyo maaweelin la maaweelinayo shacabka deegaanka inta maamulka Somaliland hawshiisa fushanayo” ayuu yiri Maxamuud Sh. Cumar, gudoomiye ku xigeenka gobolka Cayn.
Dagaalka Kalshaale, Hagoogane & Maygaagle ayaa ka kacay is-maandhjaaf ka dhex curtay laba ardaa oo ood-wadaag ah oo isku khilaafay lahaanshiyaha deegaankaasi, markii danbase isu bedeshey arrin siyaasadeed, taasi oo ay si toos ah uga dagaalameen ciidamo tabaran oo Somaliland leedahay; waxaana deegaankaasi hore uga dhacay dagaal dadbadani ku dhinteen kaasi oo iskii u hakaday markii danbe, xiligan oo lagu jiro wakhti barwaaqo ah dadkuna aad u roobsaday ayaa laga cabsi qabaa in dagaalo hor lihi deegaanadaasi ka soo cusboonaadaan; waxaana mudooyinkii danbe la hadal hayey dhaqdhaqaaqyo ciidan oo Somaliland ka wado goobihii hore loogu diriray, lamana saadaalin karo halka ay arintaasi caga dhigan doonto.